Ny sanda azonay | Bouddha Trends Brand - Buddhatrends
-Karazana momba ny hatsaran-
Ny marika antsika dia miorina amin'ny fototra miorina amin'ny hatsaran-tarehy, ny fahamendrehana ary ny fahamboniana. Mafana fo isika amin'ny fanomezana safidy tsara amin'ny akanjo mareva-doko amin'ny mpanjifa isan-karazany amin'ny fomba izay mahafinaritra ny hatsaran-tarehiny, ny hatsaran-tarehy ary ny fampiononana.
- Ny fahafaham-po sy ny fahafinaretan'ny mpanjifa-
Manana fomban-draharaham-pireharehana isika amin'ny fanavaozana, manatsara hatrany sy manome fomba amam-panaitra tsara mba hahafahantsika mameno ny masontsika amin'ny fotoana rehetra. Mino tanteraka izahay fa mahasambatra marika ny mpanjifa sambatra. Noho izany, isika dia voatery ho marika an-tongotra rehefa heverin'ny olona ho fahafaham-po sy fahafinaretana faran'izay tsara.
Manana fanoloran-tena tsy manam-paharoa momba ny etika, ny fahamarinan-toetra ary ny kalitao isika. Mikarakara ny zavatra ilain'ny mpanjifantsika isika ary ny antony manosika ny tombontsoany. Noho izany, ny politikam-pivoarana ara-bola dia azo alaina amin'ny tranga tsy fahita firy mba hanomezana toky ny fiantsenan'ny varotra erantany.
Mankalaza ny fahasamihafantsika eo amin'ny kolontsaina, ny toetran'olona ary ny tombontsoa isika izay mametraka anjara lehibe amin'ny endriny. Noho izany, ny angon-tsika dia ahitana ny akanjo 500 akanjo sy kiraro tanana an-jatony vita manerana izao tontolo izao, tafiditra ao anatin'i Eoropa, Afrika ary Azia, mba handraisana karazana fironana maro, fomba fijery, kolontsaina ary lamaody.
kitiho eto hamaky momba ny fahitana sy ny iraka an'ny Buddhatrends na mitsidika ny pejy fandraisana Mba hamoronana ny fijery mifanentana amin'ny toetranao!